You are at:Home»Activities»မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ တတိယအတွင်းဝန် Ms. Suzumi Sekine (ခေါ်) ဒေါ်မေဥမ္မာလွင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း။
By ThayNinGa on	 November 20, 2019 Activities, News
၂၉. ၁၀. ၂၀၁၉ (အင်္ဂါနေ့)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ တတိယအတွင်းဝန် Ms. Suzumi Sekine (ခေါ်) ဒေါ်မေဥမ္မာလွင်သည် သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးနှင့် ဦးသိန်းထွန်းဦးတို့အား အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ရုံးသို့ လာရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျသံရုံးမှ တတိယအတှငျးဝနျ Ms. Suzumi Sekine (ချေါ) ဒျေါမဥေမ်မာလှငျနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး။
၂၉. ၁၀. ၂၀၁၉ (အင်ျဂါနေ့)
မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျသံရုံးမှ တတိယအတှငျးဝနျ Ms. Suzumi Sekine (ချေါ) ဒျေါမဥေမ်မာလှငျသညျ သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့၏ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာမြားဖွဈကွသော ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေးနှငျ့ ဦးသိနျးထှနျးဦးတို့အား အောကျတိုဘာလ ၂၉ ရကျနကေ့ သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့ရုံးသို့ လာရောကျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။